Le ayisiyomgaqo-nkqubo wabucala, ukubhengezwa kwemigaqo.
Njengoxanduva lwam kule webhusayithi, ndifuna ukukunika ezona ziqinisekiso zomthetho zikhulu ngokubhekisele kubumfihlo bakho kwaye ndikuchaze ngokucacileyo nangokusekuhleni, yonke into emalunga nokuqwalaselwa kolwazi lomntu ngaphakathi kule webhusayithi.
Lo Mgaqo-nkqubo wabucala uza kusebenza kuphela kwidatha yobuqu efunyenwe kwiWebhusayithi, ukungasebenzi kolwazi oluqokelelwe ngumntu wesithathu kwezinye iwebhusayithi, nokuba zidibene neWebhusayithi.
Ezi meko zilandelayo zibophelela umsebenzisi kunye nomntu ophethe le webhusayithi, ke kubalulekile ukuba uthathe imizuzu embalwa ukuyifunda kwaye ukuba awuvumelani noku, musa ukuthumela idatha yakho yobuqu kule webhusayithi.
Lo mgaqo-nkqubo uhlaziyiwe ngomhla we-30/04/202020
Ngeenjongo zamalungiselelo omthetho osele ukhankanyiwe wokuKhuselwa kweDatha yoLuntu, idatha yobuqu oyithumela kuthi iza kufakwa kwifayile ye- "USERS of the WEB and SUBSCRIBERS", enomnxeba kwi-Online servicios Telemáticos SL ene-NIF: B19677095 kwaye nge Idilesi kwiC / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - IAlbolote (iGranada). Le fayile ihambise onke amanyathelo okhuseleko lobugcisa kunye nesebe asekwe kwiRoyal Decree 1720/2007, yophuhliso lwe-LOPD.
Ukuthumela nokurekhoda idatha ngokubanzi
Ukuthumela idatha yobuqu kule webhusayithi kunyanzelekile ukuba uqhakamshelane, uphawule, ubhalise kwiblogi emulador.online, uthenge iinkonzo eziboniswe kule webhusayithi kwaye uthenge iincwadi kwifomathi yedijithali.
Ngokunjalo, ukungaboneleli ngedatha eceliweyo okanye ukungamkeli lo mgaqo-nkqubo wokhuselo lwedatha kuthetha ukuba akunakwenzeka ukuba ubhalise kumxholo kunye nokulungisa izicelo ezenziwe kule webhusayithi.
Akukho mfuneko yokuba ubonelele ngayo nayiphi na idatha yobuqu yokukhangela le webhsayithi.
Yeyiphi idatha le webhusayithi eyifunayo kwaye yeyiphi injongo
Lo mgaqo-nkqubo uhlaziyiwe ngomhla we-25/03/2018
i-emulator.online iya kuqokelela iiDatha zoBuntu zaBasebenzisi, ngeefom ezikwi-intanethi, nge-Intanethi. Idatha yobuqu eqokelelweyo, kuxhomekeke kwimeko nganye, inokuba, phakathi kwezinye: igama, ifani, i-imeyile kunye nonxibelelwano lokufikelela. Kwangokunjalo, kwimeko yeenkonzo zekhontrakthi, ukuthenga iincwadi kunye nentengiso, ndiza kucela uMsebenzisi ngeenkcukacha ezithile zebhanki okanye zentlawulo.
Le webhusayithi iya kufuna kuphela idatha eyaneleyo ngokungqongqo ngenjongo yokuqokelelwa kwaye izibophelele:
Cutha ukuqhutywa kwedatha yobuqu.
Thumela idatha yakho yobuqu kangangoko kunokwenzeka.
Nika izinto elubala kwimisebenzi kunye nasekwenzeni idatha yobuqu eqhutywa kule webhusayithi.
Vumela bonke abasebenzisi ukuba babeke iliso ekuqhubeni idatha yabo eyenziwa kule webhusayithi.
Yenza kwaye uphucule izinto zokhuseleko ukuze zikunike ezona meko zikhuselekileyo zokukhangela.
Iinjongo zedatha eqokelelwe kule portal zezi zilandelayo:
Ukuphendula kwiimfuno zabasebenzisi be-es. Umzekelo, ukuba umsebenzisi ushiya ulwazi lomntu kuye nakweyiphi na iifom zonxibelelwano, singasebenzisa le datha ukuphendula isicelo sakho kwaye siphendule nakuphi na ukuthandabuza, izikhalazo, izimvo okanye iinkxalabo onokuthi ubenazo malunga nolwazi olubandakanyiweyo kwiSiza. Iwebhu, iinkonzo ezinikezelwa yiWebhusayithi, ukuqhubekeka kwedatha yakho yobuqu, imibuzo malunga nemibhalo esemthethweni efakwe kwiWebhusayithi, kunye neminye imibuzo onokuba unayo.
Ukulawula uluhlu lwezinto ezibhalisiweyo, thumela iincwadana, ukukhushulwa kunye nokunikezelwa okukhethekileyo, kule meko, siya kusetyenziswa kuphela idilesi ye-imeyile kunye negama elinikezwe ngumsebenzisi xa usenza ubhaliso.
Ukumodareyitha kunye nokuphendula kwizimvo ezenziwe ngabasebenzisi kwibhlog yi.
Ukuqinisekisa ukuthotyelwa kweemeko zokusetyenziswa kunye nomthetho osebenzayo. Oku kunokubandakanya ukuphuculwa kwezixhobo kunye neealgorithms ezinceda le webhusayithi ukuba ziqinisekise imfihlo yedatha yobuqu eyiqokelelayo.
Ukuxhasa kunye nokuphucula iinkonzo ezibonelelwa yile webhusayithi.
Ukuthengisa iimveliso kunye neenkonzo ezibonelelwa kule webhusayithi.
Ngamanye amaxesha, ulwazi malunga neendwendwe kule ndawo kwabelwana ngazo ngokungaziwa okanye zidityaniswe nabantu besithathu njengabakhangisi, abaxhasi okanye amahlakani ngenjongo yokuphucula iinkonzo zam nokwenza imali kwiwebhusayithi. Yonke le misebenzi yokulungisa iya kulawulwa ngokwemigaqo esemthethweni kwaye onke amalungelo akho malunga nokukhuselwa kwedatha aya kuhlonitshwa ngokwemigaqo yangoku.
Ityala elinye nelinye, umsebenzisi unamalungelo apheleleyo ngaphezulu kwedatha yabo kunye nokusetyenziswa kwabo kwaye unokubanokusebenzisa nangaliphi na ixesha.
Ngaphandle kwayo nayiphi na imeko le webhusayithi iya kudlulisela idatha yabucala yabasebenzisi bayo ukuya kumaqela angaphandle ngaphandle kokuba bazise kwaye bacele imvume yabo.
Iinkonzo ezibonelelwa ngabantu besithathu kule webhusayithi
Ukubonelela ngeenkonzo eziyimfuneko ngokunyanzelekileyo ukuba kuphuhle umsebenzi wayo, i-Online servicios Telemáticos SL yabelana ngedatha naba baboneleli balandelayo phantsi kwemeko zabo zabucala ezihambelana nazo.
Iqonga leWebhu: WordPress.org
Iinkonzo zekhuriya kunye nokuthumela iileta zeendaba: ImeyileChimp I-675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308.
Ukugcinwa kwelifu kunye nokugcina: I-Dropbox -Drive, Wetransfer, Iinkonzo zeWebhu ze-Amazon (i-Amazon S3)
Iinkqubo zokufaka idatha yobuqu eziqokelelwa yile webhusayithi
Le webhusayithi isebenzisa iinkqubo ezahlukeneyo zokubamba ulwazi lomntu. Le webhusayithi ihlala ifuna imvume yabasebenzisi yokuqhubekeka idatha yabo yobuqu ngeenjongo ezichaziweyo.
Umsebenzisi unelungelo lokurhoxisa imvume yakhe nangaliphi na ixesha.
Iinkqubo zokufaka ulwazi lomntu olusetyenziswa yi-emulator. Online :
Iifom zobhaliso lomxholo: Ngaphakathi kwiwebhu kukho iindlela ezininzi zokusebenzisa umrhumo. Umsebenzisi kufuneka aqinisekise ukubhaliswa kwakhe ukuze aqinisekise idilesi ye-imeyile. Idatha ebonelelweyo iya kusetyenziswa kuphela ukuthumela iNcwadana yeendaba kwaye ikugcine uhlaziywa kwiindaba kunye nokunikezelwa okuthile, ngokukodwa kubabhalisi be-es. Incwadana yeendaba ilawulwa ngu ImeyileChimp
Xa usebenzisa iinkonzo zeplatform yeChannelChimp yokuqhuba amaphulo okuthengisa nge-imeyile, ulawulo lwemirhumo nokuthumela iileta zeendaba, kuya kufuneka uyazi ukuba MailChimp Ineeseva zayo ezisingathwe eMelika kwaye ngenxa yoko idatha yakho yobuqu ziya kudluliselwa kwilizwe lakwilizwe elithathwa njengezingakhuselekanga emva kokuchithwa kweZokhuseleko oluKhuselekileyo. Ngokubhalisa, uyamkela kwaye uyavuma ukuba idatha yakho igcinwe liqonga leemeyilechimp, ese-United States, ukuze ulawule ukuthunyelwa kweeleta zeendaba ezihambelanayo. I-MailChimp iguqulelwe kumanqanaba asemgangathweni e-EU kukhuseleko lwedatha.
IFomu yokuphendula: Iwebhusayithi ibandakanya ifomu yokuphendula. Umsebenzisi unokuthumela izimvo kwizithuba ezipapashiweyo. Idatha yobuqu efakwe kwifomu yokufaka ezi zimvo ziya kusetyenziswa ngokukodwa ukumodareyitha nokuzipapasha.
Ifomu yoQhakamshelwano: Kukwakhona nefom yoqhakamshelwano yemibuzo, iingcebiso okanye unxibelelwano lobuchwephesha. Kule meko idilesi ye-imeyile iya kusetyenziselwa ukuphendula kubo kwaye uthumele ulwazi olufunwa ngumsebenzisi kwiwebhu.
cookies: Xa umsebenzisi ebhalisa okanye ejikeleza kule webhusayithi, «cookies» zigcinwe, Umsebenzisi unokubonisana nangaliphi na ixesha umgaqo-nkqubo wecookie ukwandisa ulwazi ngokusetyenziswa kweicookies kunye nendlela yokwenza ngayo.
Khuphela iiNkqubo: Kule webhusayithi unokukhuphela imixholo eyahlukeneyo efakwe rhoqo kwisicatshulwa, ividiyo kunye nefomathi yeaudio. Kule meko, i-imeyile iyacelwa ukuba isebenze kwifom yobhaliso. Ulwazi lwakho lusetyenziselwa iinjongo eziboniswe kubabhalisi.
Ukuthengisa iimpapasho: Ngokusebenzisa ipostal ungathenga iimpapasho kunye ne-infoproducts ezivela kwi-Intanethi ye-servicios Telemáticos SL, kule meko, ulwazi lomthengi (Igama, ifani, kunye nomnxeba, idilesi yeposi kunye ne-imeyile) ziyafuneka njengeqonga lePaypal njengefom yentlawulo.
Abasebenzisi banako ungabhalisi nangaliphi na ixesha yeenkonzo ezibonelelwa ngu-emulador. kwi-Newsletter efanayo.
Umsebenzisi uyakufumana ngaphakathi kule ndawo, amaphepha, ukunyusa, abaxhasi, iinkqubo ezinxulumeneyo fikelela kwimikhangeli yokukhangela yomsebenzisi ukuseka iiprofayili zomsebenzisi kunye nokubonisa intengiso yomntu esekelwe kumdla wabo wokukhangela kunye nemikhwa. Olu lwazi luhlala lungaziwa kwaye umsebenzisi akachongwa.
Ulwazi olunikezwe kwezi ndawo zixhaswayo okanye amakhonkco enxibelelana nawo axhomekeke kwimigaqo-nkqubo yabucala esetyenziswa kwezi Sayithi kwaye ayizukubakho kulo mgaqo-nkqubo wabucala. Ke ngoko, sincoma kakhulu abaSebenzisi ukuba baphonononge ngokweenkcukacha imigaqo-nkqubo yabucala yonxibelelwano.
Umgaqo-nkqubo wabucala wentengiso ebonelelwe kwiAdsense: Adsense Google.
Umgaqo-nkqubo wabucala wemithombo yokulandela umkhondo esetyenziswe kule ndawo:UGoogle (Uhlalutyo)
I-Emulator.online ikwafunda nokukhethwa ngabasebenzisi bayo, iimpawu zabo zedemokhrasi, iipateni zabo zendlela, kunye nolunye ulwazi ngokudibeneyo ukuze baqonde ngcono ukuba ngubani abaphulaphuli bethu kunye nento abayifunayo. Ukulandelela ukhetho lwabasebenzisi bethu kukwasinceda ukuba sikubonise ezona ntengiso zichaphazelekayo.
Umsebenzisi kwaye, ngokubanzi, nawuphina umntu wendalo okanye wezomthetho, unokuseka ikhonkco okanye isixhobo soqhakamshelwano lobuchwephesha (umzekelo, amakhonkco okanye amaqhosha) kwiwebhusayithi yabo ukuya kwi-emulator.online (i "Hyperlink"). Ukusekwa kwe-Hyperlink akuthethi nakweyiphi na imeko ubukho bobudlelwane phakathi kwe-emulator.online kunye nomnini wesiza okanye iphepha lewebhu apho i-Hyperlink isekwe khona, okanye ukwamkelwa okanye ukuvunywa yi-emulator. iinkonzo. Ngayiphi na imeko, i-emulator.online inelungelo lokuthintela okanye ukukhubaza nayiphi na ikhonkco kwiWebhusayithi nangaliphi na ixesha.
Ukuchaneka kunye nokunyaniseka kwedatha
Umsebenzisi uqinisekisa ukuba idatha yobuqu ebonelelwe kwiifom ezahlukeneyo iyinyani, inyanzelekile ukuba inxibelelane naluphi na uhlengahlengiso lwayo. Ngokunjalo, uMsebenzisi uqinisekisa ukuba lonke ulwazi olunikiweyo luyahambelana nemeko yabo yokwenene, ukuba ihlaziyiwe kwaye ichanekile. Ukongeza, uMsebenzisi uzimisele ukugcina idatha yakhe ihlaziywa ngalo lonke ixesha, enoxanduva lokungachaneki okanye ubuxoki bedatha ebonelelweyo kunye nomonakalo onokubangelwa koku kwi-Intanethi Servicios Telemáticos SL njengomnini we-web emulator. Online.
Ukusetyenziswa kwamalungelo okufikelela, ukulungiswa kwakhona, ukucinywa okanye inkcaso
Amalungelo abaSebenzisa oku kulandelayo:
Ilungelo lokubuza ukuba yeyiphi idatha yobuqu esiyigcinayo malunga noMsebenzisi nangaliphi na ixesha.
Ilungelo lokubuza kuthi ukuba sihlaziye okanye silungise idatha yasimahla engachanekanga okanye ephelileyo esiyigcinayo malunga noMsebenzisi.
Ilungelo lokuzikhupha kulo naluphi na unxibelelwano lokuthengisa malunga nokuthengisa esinokuluthumela kuMsebenzisi.
Unokwalathisa unxibelelwano lwakho kwaye usebenzise amalungelo ukufikelela, ukulungiswa kwakhona, ukucinywa kunye nenkcaso Ngokuthunyelwa ngeposi eC / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 -Albolote (eGranada) okanye nge-imeyile: info (e) emulador.online kunye nobungqina obusemthethweni, njengefotokopi ye-DNI okanye efanayo, ebonisa kumxholo othi "UKHUSELEKO LWEDATHA".
Umsebenzisi uxele ukuba wazisiwe ngemiqathango yokhuseleko lwedatha yobuqu, ukwamkela kunye nokuvuma unyango lwayo yi-Online Servicios Telemáticos SL ngendlela nangeenjongo ezichaziweyo kwisaziso esisemthethweni.
Utshintsho lwalo mgaqo-nkqubo wabucala
Kwi-Intanethi i-Servicios Telemáticos SL inelungelo lokutshintsha lo mgaqo-nkqubo ukuze iwulungelelanise nomthetho omtsha okanye ezomthetho ngokunjalo nezenzo zeshishini. Kwiimeko ezinjalo, uMboneleli uya kubhengeza kweli phepha utshintsho olwenziwe ngolindelo olufanelekileyo lokuphunyezwa.
Ngokuhambelana ne-LSSICE, i-Intanethi i-Servicios Telemáticos SL ayizenzi iinkqubo ze-SPAM, ngenxa yoko ayithumeli ii-imeyile zorhwebo ezingakhange zicelwe ngaphambili okanye zigunyaziswe nguMsebenzisi, ngamanye amaxesha, zinokuthumela ukunyuselwa kunye nezibonelelo ezithile kunye amaqela esithathu, kuphela kwiimeko apho unegunya labamkeli.
Ngenxa yoko, kwifomu nganye ebonelelwe kwiWebhusayithi, uMsebenzisi unethuba lokunika imvume yakhe yokufumana "iNcwadana yam", ngaphandle kolwazi lwentengiso oluceliweyo. Unokurhoxisa umrhumo wakho ngokuzenzekelayo kwiincwadana ezifanayo.